Pesdị, Akụ, na Ngwọta Maka Nchọpụta Mgbagha Mgbasa Ozi | Martech Zone
Pesdị, Akụ, na Ngwọta Maka Nchọpụta Mgbagha Mgbasa Ozi
Tuesday, April 11, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Na nyocha nke ndi Association nke Ndị Mgbasa Ozi Mba (ANA) na White Ops, ọmụmụ ahụ buru amụma na mgbasa ozi wayo na-efu ndị mgbasa ozi $ 7.2 ijeri afọ gara aga. Na nyocha nke mgbasa ozi ngosi dijitalụ US, Sayensị Mgbakwunye Ad amata 8.3% nke mgbasa ozi mgbasa ozi niile dị ka aghụghọ, ma e jiri ya tụnyere 2.4% nke mgbasa ozi na-ere ahịa. Nyochaa na-akọ na a naghị ahụ ihe karịrị 50% nke mgbasa ozi dijitalụ.
Kedu ụdị Ty Ad Ads?
Akara (CPM) Ad Fraud - ndị aghụghọ na-ezochi mgbasa ozi na pixel 1 × 1 ma ọ bụ na-agbakwunye mgbasa ozi n'elu ibe ha iji mụbaa echiche nke mgbasa ozi na-ahụ na saịtị.
Search (CPC) Ad wayo - ndị na-aghọ aghụghọ na-etolite ebe nrụọrụ weebụ adịgboroja, mgbe ụfọdụ na-akpaghị aka, na-eji isiokwu dị elu-kwa-pịa dị na ọdịnaya iji mee ka mgbasa ozi kachasị ọnụ gaa na saịtị ha.
Mgbakwunye (CPA) Ad Fraud (AKA Cookie Stuffing) - saịtị na-akwụkarị ndị ọrụ ụgwọ na-eme ihe, yabụ ndị aghụghọ na-arụpụta ihe omume ụgha iji ghọgbuo usoro mgbasa ozi ahụ ikwere na ọrụ dị.
Na-eduga (CPL) Ad Fraud (AKA Conversion Fraud) - kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ndị aghụghọ nwere ike ịkwụ ụgwọ ndị ọrụ obere ego iji mejupụta ụdị karịa ka ha na-akwụ ụgwọ maka ntugharị… na-ebute adịgboroja, uru na-eduga.
Ọgwụ Ad na AdWare Wayo - ndị wayo jiri toolbars ma ọ bụ malware iji gbasaa mgbasa ozi na ahụmịhe nchọgharị nke ezigbo ndị ọrụ, na -emepụta mmetụta mgbasa ozi karịa na ọnụego pịa-elu.
Ngalaba Spoofing ma ọ bụ Lagha Adịgboroja Ad - ndị wayo na-agbanwe URL nke saịtị iji mee ka ndị mgbasa ozi chee na adịgboroja ma ọ bụ paireti ma ọ bụ saịtị porn bụ n'ezie saịtị nke ndị nkwusa a ma ama.
CMS Wayo - ndị na-aghọ aghụghọ wayo ma ọ bụ tinye malware n'ime sistemụ njikwa ọdịnaya nke onye mbipute nke na -emepụta ibe ha site na iji ngalaba ziri ezi.
Re-ezubere iche Wayo - bots na-e imitateomi ndị ọbịa n'ezie ma mepụta echiche na pịa na mkpọsa a na-agba ọsọ.
Okporo Frazọ Okporo orzọ ma ọ bụ Mgbakwunye Ndị Ntị ndị nkwusa na-azụta okporo ụzọ ndị e kewara ekewa iji mepụta ọnụọgụ nke mmetụta dị mkpa iji mezuo mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgụ gbasara ụdị ụdị mgbasa ozi a n’ụzọ zuru ezu, lelee ederede John Wilpers, Kedu ihe ụdị iteghete nke mgbasa ozi mgbasa ozi dijitalụ?
Ngwọta Mgbasa Ozi Ad:
Companieslọ ọrụ atọ ahụ ekwuru n'elu bụkwa ndị isi na oghere Ad Fraud solutions.
Sayensị Mgbakwunye Ad - kwadoro site na Ndị Nchịkọta Mgbasa Ozi, Ihe ngosiputa nke Science na-ekpuchi webusaiti, ngwanrọ n’ime ngwa, ngosiputa desktọọpụ, ngosipụta na nchọpụta mgbasa ozi vidiyo. Teknụzụ ha na njikarịcha nke ha na-enye gị ụzọ iji belata mbibi na atụmatụ mgbasa ozi gị site na igbochi mgbasa ozi site na mgbe a na-eje ozi na ibe weebụ na-akwụ ụgwọ na ịkwụsị ọnụ ahịa maka echiche aghụghọ na ezigbo oge.
DoubleVerify n'ọtụtụ kasị elu - na-enyocha ogo nke akara ọ bụla enyerepụtara yana nsonaazụ net nke ogo ọ bụla. Ikpo okwu a na-emekwa ka njikarịcha njikarịcha dị mfe site na ịnye nyocha miri emi na nhụta oge maka ịchụpụ echiche gị.
WhiteOps FraudSensor na MediaGuard - FraudSensor na-enyocha nyiwe niile ma na-enyocha akara ngosi ihe nchọgharị 1,000+. Kwadoro site na MRC maka nchọpụta ọkaibe na-adịghị mma (SIVT). MediaGuard MediaGuard na-bụ API azịza nke na-enyocha arịrịọ ọ bụla maka ịrịọ ma ọ bụ mgbasa ozi na milliseconds ma na-enye usoro mmemme tupu ị gbochie igbochi ịzụrụ aghụghọ.
Banyere Council Rating Council
MRC bụ ụlọ ọrụ na-enweghị uru ụlọ ọrụ guzobere na 1963 nke ndị isi telivishọn, redio, mbipụta na ụlọ ọrụ Internetntanetị, yana ndị mgbasa ozi, ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ndị ọrụ azụmahịa bụ ndị ebumnuche ha bụ iji hụ na ọrụ nha dị mma, nke a pụrụ ịtụkwasị obi ma dị irè.
Tags: ad wayoogwu ogbugbaadware wayoMgbakwunye mgbasa ozi wayoaka ad wayona-ege ntị ndọtị wayoCms wayontughari ntugharinri kukicpa ad wayocpc ad wayocpl ad wayocpm ad wayondenye ngalabameghariadvdv ntụtụechiche ad wayoihe gbasara sayensịJohn wilperslaundered ad echiche wayona-edu ad adigbure-ezubere iche wayoimeghari aghụghọchọọ mgbasa ozi wayoahia wayoacha ọcha
Mouse Selfie: Nweta Foto Selfie maka azụmahịa gị ma ọ bụ mmemme gị